Archive du 20170711
Pr Raymond Ranjeva Ambonin’ny didim-pitondrana ny didim-pitsarana
Tsy mazava amin’ny olom-pirenena hatramin’izao ny fihetsiky ny fitondrana foibe nanakana ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny tsingerin-taona faha-15 taona niorenan’ny antoko Tiako I Madagasikara teny amin’ny kianjamben’i Mahamasina ny 8 jolay lasa teo.
Manoro Regis « Mampanahy raha izao no hanaovana fifidianana ! »
Elaela no tsy nahenoana intsony ny minisitry ny fanabeazana teo aloha sady mpikamban’ny antoko UNDD, Manoro Regis, naneho ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena.
Mahafaritsy Samuel Razakanirina Tsy mangaraharaha ny fitantanan’ny HVM
Tsy mahagaga raha mitaraina amin’ny fijaliana sy fahasahiranana mianjady aminy ny mpiray tanindrazana, hoy ny filohan’ny antoko Malagasy Iray Mahafaritsy Samuel Razakanirina.
Feno ny kapoakan’ny SMM Manomboka anio indray ny fitokonana
Hiroso amin’ny fitokonana manomboka anio talata 11 jolay ka hatramin’ny 18 jolay ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM).
ENS Ampefiloha Notolorana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra mihoatra ny 70 taona
Nisokatra omaly tetsy amin’ny sekoly ambony ENS ny andiany faharoa amin’ny herinandron’ity sekoly ity.
Razanatovo Lucien René Hampandroso ny taranja rugby Malagasy no tanjona
Nanaiky ny hotendrena ho “Directeur de Compétition” eo anivon’ny Federasiona Malagasin’ny taranja rugby à XV ankehitriny ny tenako, hoy Atoa Razanatovo Lucien René na i Néné.
Iza no vonon-kihavana ?
Iza no vonon-kihavana ? Heverina fa izay no fintin’ny fanontaniana nipetraka tao an-dohan’ny filoham-pirenena teo aloha raha namaly izany ka nilaza fa tsy fotoana ny
Air Madagascar Mpitatitra ofisialin’ny « Festival des Baleines »
Tanterahana any amin’ny nosy sainte Marie nanomboka ny 9 ka hifarana ny 16 jolay ho avy izao ny Festival des Baleines andiany faha-3 izay karakarain’ny Cetamada.
ENS Ampefiloha Hampita ny «esprit normalien» amin’ny fiarahamonina
Efa miravona ankehitriny ny disadisa nitranga tao amin’ity ivontoerana fampianarana ambony ity, hoy ny talen’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) ny profesora Andriambelimanana Henriette.
CNTEMAD Efa vonona ny boky amin’ny fanadinana enim-bolana faharoa
Niteraka fanaratsiana ny sekoly ambony CNTEMAD teo ny tsy fahavitan’ny boky mialoha ny hanatanterahan’ny mpianatra ny fanadinana enim-bolana voalohany.
Firodanan’ny fonjan’Antsohihy Tafakatra 8 ny maty
Tafakatra 8 ny olona namoy ny ainy vokatry ny firodanan’ny rindrin’ny fonjan’Antsohihy ny sabotsy 8 jolay lasa teo noho ny tsio-drivotra mahery.
Na dia efa tena miaina ao anatin’ny hatsiaka tanteraka aza isika eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao dia fantatra fa hahazo vahana kokoa izany mandritra ny faran’ny herinandro izao,